पराजयपछि रेखा थापाको अबको बाटो कता ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
यतिबेला रेखा थापाको चारैतिर चर्चा छ । राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महामन्त्रीको पदमा उम्मेद्वारी दिएकी रेखा थापा केही मत अन्तरले पराजित भइन् । कमल थापा पक्षकी कुन्ती कुमारी शाहीले रेखा थापालाई पराजित गरेकी हुन् । मत परिणामअनुसार शाहीले २००८ मत ल्याउँदा थापाले १६४० मत मात्र प्राप्त गरिन् ।
वि.सं २०३९ भाद्र ५ मा मोरङ बेलबारीमा जन्मिएकी थापा नेपाली रजतपटमा अहिले पनि उत्तिकै चर्चित नायिकाको रुपमा परिचित छिन्् । पछिल्लो समय रेखा थापा पहिरनले मात्रै नभई स्वभावले पनि बोल्ड छिन् ।
कलाकारबाट निर्माता निर्देशक अनि भएकी रेखाको पहिचान नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकदमै फरक छ । अभिनेत्री थापा पछिल्लो समय समाजिक चेतना दिने चलचित्रहरुको निर्माण गर्दै आएकी छिन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट आफ्नो परिचय बनाएकी उनीसगै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कतिपय कलाकारले त्यति परिचय बनाउन सकेनन् भने कतिपय कलाकार आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि विदेशतिर पलायन भएका छन् ।
नेपाली चलचित्रमा हाईहाई
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी रेखालाई सुरुमा बोल्ड नायिकको रूपमा हेरियो । त्यसपछि उनी चलचित्रमा नायकका रूपमा प्रस्तुत हुन थालिन् अर्थात् केन्द्रीय पात्र महिला नै रहेका चलचित्रमा रेखा सफल हुँदै गइन् र समसामयिक रूपले सन्देशमूलक नेपालीको मन छुने चलचित्रको निर्माण पनि गरिन् ।
केही वर्षदेखि उनी चलचित्र निर्माणसँगै निर्देशनमा पनि सक्रिय भइन् । पछिल्लो समय बालविवाहको विषयलाई समेटेर निमार्ण गरिएको ‘मालिका’मा चलचित्रमा कर्णाली क्षेत्रको कथा समेटिएसँगै मुख्य पात्रको रूपमा सुदूर पश्चिमकी सामान्य किशोरीलाई लिएर निमार्ण भएको चलचित्र हलमा त्यति स्थान पाउन नसके पनि युट्युबमा भने रेखाको हाइ हाइ नै भयो ।
बालबालिका, महिला शेषण र बालविवाहको अन्तय गर्नुपछि भन्ने सन्देश चलचित्रले दिएको छ । चलचित्रबाट उनले समाज परिवर्तनको विचार राखेकी छिन् । हालसम्म उनले २०० वटा भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् भने उनका दर्जनौं सुपरहिट चलचित्र बनिसकेका छन् ।
सिने क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा क्षेत्रमा पनि सफलताको अपेक्षा
रेखा थापा नेपनली सिनेमा जगत्मा एउटा सफल नाम हो । उनी ‘नयाँ कलाकार’ जन्माउने हिरोइन हुन् । उनको समयमा नायिकालाई पुरुष पात्रको वरपर घुम्ने पात्रका रूपमा लिइन्थ्यो । पछिल्लो समय थापा सामाजिक विषयवस्तुहरू, विशेषगरी महिला हिंसाका विरुद्धमा चलचित्रहरू बनाउन थालेकी छन् ।
रेखाले सन् १९९९ मिस नेपालमा सहभागी भएर उनी उत्कृष्ट दशमा पर्न सफल भएकी थिइन् । सन् २०१० र २०११ मा उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको सिजी डिजिटल फिल्म पुरस्कार पाएकी थिइन् र सन् २०११ मा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको नेफ्टा फिल्म पुरस्कार जितेकी थिइन् । जुन २०१३ मा रेखा थापा पूर्णतया नयाँ अवतारमा वेब म्यागजिनको बाहिरी पृष्ठमा देखिएकी थिइन् ।
मैले कुनै सामाजिक काम गरेँ भने मलाई चलचित्रसँग जोडेर सम्बोधन गरिन्छ, जबकि म त्यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता वा राजनीतिक व्यक्तिको हैसियतले काम गरिरहेकी हुन्छु । चलचित्रमा मलाई सबैले माया गरिदिनुभयो, यसप्रति म कृतज्ञ छु’, रेखा भन्छिन्, ‘अब तमाम महिला दिदीबहिनीको आवाज र अधिकार तथा देशको समृद्धिका खातिर राजनीतिको मैदानमा उत्रिएकी छु । त्यसैले म साथ, सहयोग, हौसलाको अपेक्षा गर्छु ।’
अभिनेत्री रेखा राजनीतिमा होमिएको लामो समय भएको छैन । चलचित्र हिरोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी रेखा यतिबेला भने राजनीति क्षेत्रमा समेत उदाएकी छिन् ।
चलचित्र क्षेत्र होस् या राजनीति क्षेत्रमा रेखा थापा भनेपछि बालकदेखि वृद्धसम्मका लागि परिचित नाम हो । चलचित्र र राजनीति क्षेत्रमा मात्र नभइ सामाजिक कार्यमा पनि उनी अगाडि नै छिन् । उनले रेखा थापा फाउन्डेसनको नामबाट समाजसेवा समेत गर्दै आइरहेकी छिन् । हाल उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सम्लग्न छिन् ।
रेखा थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकी हुन् राप्रपामा १ जना महिलासहित ३ महामन्त्रीको व्यवस्था भएकोले अभिनेत्री थापाले राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि हिन्दू राष्ट्र बनाउने जागरण अभियानमा समेत लागेकी छिन् ।
रेखालाई प्रायः ‘हट एन्ड सेक्सी हिरोइन । भनेर सबैले चिन्छन्, तर, उनी राजनीति र खेलकुदमा पनि उति नै सक्रिय छिन्् । चलचित्र र राजनीतिलाई उनले एउटै सिक्काका २ पाटोका रूपमा लिइरहेकी छिन् ।
रेखा थापा ए.ने.क.पा.माओवादीको सदस्य थिइन् । उनी संविधानसभा निर्वाचनमा सभासद्का लागि उम्मेद्वारी दिने खबरले पनि चर्चामा आएकी थिइन् । कोटेश्वरमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को पार्टी मुख्यालय कार्यालयको एक सार्वजनिक कार्यक्रम बीच एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा भएको उनको प्रवेशलाई उनका प्रशंसकहरूले केही आलोचना गरेका थिए ।
यस्तै, नोभेम्बर २००९ मा थापाले दरबार स्क्वायरमा, ए.ने.क.पा. माओवादीको सरकारको मुख्यालय घेराउ कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नृत्य गरेकी थिइन् । सो नृत्यले रेखासँगै प्रचण्डको पनि निकै आलोचना भयो । नेपाली चलचित्र जगतमा थापाले एकछत्र राज गरेकी अभिनेत्री रेखा ‘वाहवाही’ कमाइरहेकै अवस्थामा प्रचण्डलाई उनले एउटा मञ्चमै नचाएकी थिइन् । त्यसले नेपाली सिने क्षेत्र मात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि तताएको थियो ।
२०७० सालमा माओवादीमा प्रवेश गरेकी उनले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीबाट पर्सा–१ का लागि टिकट पाइन् । तर, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण उनी उम्मेदवार बन्न योग्य भइनन् । र, उनी केही समयलगत्तै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) मा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
कुनै बेला माओवादीमा रहेकी रेखा अहिले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)मा केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा उम्मेदवारी दिइन् ।
उनको विचारमा माओवादी र राप्रपा सिद्धान्ततः २ पार्टीबीच आकाश–जमिनको फरक छ । क्रान्ति र परिवर्तनका कुरा गर्ने माओवादी पार्टी छाडेर कारण
रेखा थापा भन्छिन् – ‘त्यतिबेला माओवादीका नेतामा क्रान्तिको भोक, पार्टीमा चेतना र परिवर्तनको विगुल फुक्न सक्ने तागत देखेकी थिएँ तर, चुनावपछि उनीहरूले पुरानै रवैया, पुरानै प्रवृत्ति र अभ्यासमा लिप्त हुने लक्षण देखाए । फेरि पुरानैतिर फर्किने हो भने किन नयाँ हुँदै पुरानोमा जाने ? सीधै पुरानोमा जाने हो, मैले त्यसै गरेँ ।
अबको बाटो कता ?
राप्रपाको वैचारिक राजनीतिक उद्देश्य हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनस्र्थापित होस् भन्ने छ । त्योसँगसँगै महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी रेखा अहिले राप्रपाको संगठन सुधार र राप्रपाको राजनीतिक, वैचारिक ‘लाइन’मा समाहित भइरहेकी छिन् । अहिलेको राजनीतिलाई दोस्रो पुस्ताले सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छिन् । देश र जनताको हितका पक्षमा काम जुनसुकै पार्टीमा रहेर पनि गर्न सकिन्छ नि ! राप्रपासँग आफ्नै सिद्धान्त एवं मौलिक पहिचान छ, त्यसैले मैले राप्रपा रोजेँ । अब, कता जाने भन्दा पनि हारेर पनि पार्टीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ ।’
उनको पेशा र रोजाइ कलाकारिता हो । तर, उनी राजनीतिलाई सेवा ठान्छिन् । नेपाली समाजमा उनी महिला सशक्तीकरणको एउटा उदाहरणका रूपमा उदाएकी छिन् । आशा छ, राजनीतिको बाटोबाट वा कलाको बाटो जताबाट गए पनि अबको बाटोमा नयाँ बिहानी बनेर उदाउनुस् शुभकामना ।
प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७८, सोमबार १२ : ११ बजे